I-SP-E004 e-Rechargeable engenamanzi i-Aromatherapy Aroma Nebulizer, i-China SP-E004 e-Rechargeable engenamanzi i-Aromatherapy Aroma Nebulizer abavelisi, abaxhasi, abaFektri -I-Sunpai Industries Limited
I-SP-E004 enokutsha kwakhona engenamanzi iAromatherapy Aroma Nebulizer
Inani Model: I-SP-E004
Iinkcukacha zoPakethe: Amacwecwe ayi-24 / ibhokisi
Ukutsha kwakhona kweAromatherapy Aroma Aroma Nebulizer
1.Ukungenamanzi kunye nokungabikho kobushushu: Esi sixhobo sokuhambisa ioyile singenamanzi sisebenzisa itekhnoloji yokusasaza ebandayo, eguqula ioyile ebalulekileyo ukuba ibe ngumphunga ocolekileyo omncinci malunga ne-1-3 yeemicron ngaphandle kobushushu namanzi.
I-2 engenacingo kunye ne-zitshajekayo: Inkungu ebandayo yokwenza i-diffuser eyakhelwe-ngaphakathi kwi-2200mAh ibhetri ye-lithium, egcwalisekayo kunye ephathekayo. Kukulungele ukuphatha kwaye kufanelekile ekhaya, eofisini, studio, kwezohambo kunye neyoga.
UKUSEBENZA KULULA: Vuza nje amathontsi ali-3 ukuya kwi-10 eoyile ebalulekileyo kwiglasi yeglasi ecaleni kodonga lwangaphakathi lweglasi, gubungela isiciko, uchukumise iqhosha lamandla, le ibhetri iyasasaza ivumba elifanelekileyo ukusukela kwangoko ukuba uyijike ivuliwe.
Amava eAROMATHERAPY: Ukuphiliswa kwendalo kunye noVuyo olunyulu, ukuThula okuPhezulu, kwenziwe ngeglasi evuthuzayo kunye ne-4% yomthi onzima ukuze ufumane iipropathi zeoyile yendalo.
IINKCUKACHA EZIKHUSELEKILEYO NEZIMELEYO: Zenziwe ngezixhobo zepremiyamu kunye neenkqubo zokuvelisa ezingqongqo. Iglasi yegumbi lokugcina ioyile liyaphephethwa ngesandla ngezixhobo ezinokusingqongileyo. Isiciko sangaphandle sisebenzisa itekhnoloji yomphezulu we-oxidation kwaye senziwe ngealuminium alloy. Sisebenzisa i-5% yezinto ezingezizo ityhefu ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho.
imveliso Inkcazo: DC5V, 1A
imathiriyeli IAluminiyam ingxubevange + Iglasi + ABS
Umthamo wenkungu 0.2-0.3ml./yure
Ixesha lokugqibela 2hours
Ubungakanani beyunithi I6.8cm * 16cm
Ubungakanani bebhokisi yemibala 11 * 11 * 22cm
ipakethe Iziqwenga ezili-24 / ibhokisi
Ubungakanani beCarton 44.5 * 34.5 * 46cm
NW / ibhokisi 16.8 Kum
GW / ibhokisi 17.8 Kum
SP-L08 SOICARE 300ml itswele intloko iinkuni ingqolowa aromatherapy cuke iinkuni ivumba diffuser